विचार / विश्लेषण परिवार दलका अध्यक्ष भन्छन्– खै किन हो हिजोआज वच्चा जन्मेका छैनन् Tuesday, 10 Jan, 2017 2:27 PM
उनको दलको नाम नै नेपाल परिवार दल । सांसद एकनाथ ढकाल परिवार दलका अध्यक्ष मात्र होइनन् परिवार पनि ठूलो भएको मन पराउँछन् । जसले गर्दा उनको परिवार पनि ठूलै छ । अहिले ६ जना छोरीहरु छन् भने अझै धेरै सन्तान बढ्न सक्ने ढकाल बताउँछन् । परिवारलाई ईश्वरको वरदान ठान्ने ढकालको परिवार जीवनबारे चक्रपथ डटकमका लागि कविता अधिकारीसँग उनीसँग गरेको कुराकानीः
तपाईंको त पार्टीको नाम जस्तै परिवार पनि ठूलै रहेछ नि ? हैन हैन, बच्चा कति पाउने भन्ने त व्यक्तिगत कुरा हो । कम्तिमा बच्चा पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मानवजातिमा परिवारको महत्व वास्तवमा जति व्याख्या गरे पनि सकिंदैन । कतिपय दार्शनिकले परिवार भनेको स्वर्ग हो भनेका छन् । परिवारको सुरुवात श्रीमान श्रीमती बीचको प्रेम र विश्वासबाट हुन्छ । कतिपय देशमा कति बच्चा जन्माउन पाउने भन्ने कानुन हुन्छ । तर हाम्रो देशमा बच्चा पाउने बिषयमा कुनै कानुनी प्रावधान छैन । मेरो व्यक्तिगत धारणमा बालबालिका भनेको ईश्वरका बरदान हुन् । इश्वरले कसैलाई जन्मिंदा जन्माएर मात्रै पठाएको हुदैन, त्यसलाई जन्मिंदै हात खुट्टा र भविष्य दिएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुको जन्मिन पाउने अधिकार रोक्नु हुँदैन ।
सन्तान चाहिँ कति छन् तपाईंका ?
६ वटी छोरी मात्रै छन् ।
छोराको रहरले ६ छोरी भएका त हैनन् ?
हैन हैन, मलाइ छोराको रहर छैन । छोरा होस् कि छोरी निरन्तर रुपमा जन्माउँदै गएका छौं । कतिपय सभासदले मलाई एउटा पनि छोरा भएनछ विचरा भन्छन् । तर मलाइ उहाँहरुप्रति नै सहानुभुति लाग्छ । कतिले अलि होच्याएर पनि कुरा गर्छन् । मलाई कहिलेकाहिँ लाग्छ– ओ हो ! नेपालमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिर्वतन आएको रहेनछ । तर मैले चाहिँ छोराछोरीलाई बरावर रुपमा हेर्ने गर्छु । निरन्तर जन्माउँदा छोरा वा छोरी जे पनि जन्मिन सक्छन् ।
भनेपछि विवाह गरेदेखि अहिलेसम्म परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नुभएको छैन ?
छैन छैन । मैले बच्चा जन्मनबाट रोक्नका लागि कुनै साधनको प्रयोग गरेको छैन, गर्नेवाला पनि छैन । म प्राकृतिक रुपमा भएको कुरालाई रोक्ने पक्षमा छैन ।
जनसंख्या पनि सम्पत्ती हो, देशको जनसंख्यालाई मैले ६ जना योगदान गरेँ । विश्वको जनसंख्यामा ६ जनाको योगदान दिएँ । त्यसैमा म खुसी छु ।
तपाईंका सन्तानबीच कति बर्षको फरक छ ?
जेठी छोरी १५ बर्षकी भइन् र सानी छोरी ४ बर्षकी छन् । बीचमा त्यस्तै एकडेढ बर्षको फरक छ ।
भनेपछि अव अर्को जन्मिने तयारीमा ?
तयारी त तयारी मै छौं । तर खै किन हो हिजोहाज जन्मिरहेका छैनन् ।
अझै हुने सम्भावना छ कि छैन ?
अघि नै भनिसकेँ नि, हुन सक्ने सम्भावना त प्रशस्तै छ । म अझै युवा नै छु, भर्खरै ४२ बर्षको भएँ । मेरी श्रीमती ३७ बर्षकी भइन् । अझै पनि सन्तान हुन सक्छन् । कतिपयले छोराको रहरले हो भन्छन् । आमाको म सात दिदीवहिनी पछिको आठौं सन्तानका रुपमा छोरा जन्मिएको हँु । त्यसैले वंशाणुगत रुपमा गयो भने चाहिँ मेरो भन्नु केही छैन । तर, मलाई छोरा नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन । मेरा छोरा भने पनि छोरी भने पनि यी ६ छोरी हुन् । मेरो सम्पति पनि यिनै हुन्, भगवानका आशिर्वाद हुन् । कतिपयले गर्भमै छोरा र छोरीको पहिचान गरी भँु्रण हत्या गराउने पनि गरेका छन् । हामी त्यसको बिरोधी हौं । आज ६ सन्तान छन्, भोलि अरु जन्मिए भने पनि तिनका लागि पनि तयारीमै छौं ।
धेरै सन्तान जन्माउने तपाईंको चाहनाले मात्रै हुन्छ र ?
मेरो मात्रै चाहना हैन । मेरी श्रीमती म भन्दा बढि खुसी छन् । उनलाई पनि धेरै सन्तान भएको मन पर्छ । हामी दुबैको सहमतिले नै बच्चा जन्मिने हुन् । फेरि खुसी कसरी पाउने भन्ने त आफूमा भर पर्ने हो । कोही सन्तान नै नभएर पनि खुसी छन् । कोही एउटा मात्रै दुइटा मात्रैमा पनि खुसी छन् होला । तर म चाहिँ ठूलो परिवारमा रमाउने मान्छे हुँ । मैले बच्चा जन्मनबाट रोक्नका लागि कुनै साधनको प्रयोग गरेको छैन, गर्नेवाला पनि छैन । म प्राकृतिक रुपमा भएको कुरालाई रोक्ने पक्षमा छैन ।
यति महँगो समयमा यति धेरै सन्तान हुर्काउँन गाह्रो छैन ?
उनीहरुलाई हुर्काउँने हाम्रो कर्तव्य हो । तर, पछि कसलाई के थाहा भोलि मेरा छोरीहरु महत्वपूर्ण स्थानमा पनि पुग्न सक्छन् । भोलिका सम्भावना त धेरै छन् नि । उनीहरुले मुख मात्र लिएर आएका छैनन् नि । भोलि देशका लागि अति आवश्यक स्थानमा पनि पुग्न सक्छन् । त्यसैले अहिले केही समस्या भए पनि हामीले आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्ने हो । ईश्वरले सबै पूरा गरिहाल्छन् नि ।
अहिलेको जमानामा त एक सन्तान भए पुग्छ भन्ने भइसक्यो नि होइन र ?
हेर्नुस्, सबैको एकै मात्र सन्तान भयो भने त संसार कसरी चल्छ ? म त ठूलो परिवारमा हुर्किएको मानिस । म ठूलो परिवार भएको मन पराउँछु । परिवार जति ठूलो भयो त्यति आनन्द लाग्छ । म परिवारलाई भारको रुपमा भन्दा आशिर्वाद र अवसरका रुपमा लिन्छु ।
धेरै सन्तान जन्माउँदा श्रीमतीको स्वास्थ्य कमजोर हँुदैन ?
खै, मलाइ त त्यस्तो लाग्दैन । मेरी श्रीमती स्वस्थ नै छिन् । प्रकृतिले नै महिलालाई बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता दिएको हुन्छ ।
तपाईं कुनै धर्मबाट प्रभावित भएर त होइन सन्तान जन्माउने क्रम नरोकेको ?
होइन, म कुनै धर्मबाट प्रभावित भएर होइन । म भन्छु कम्तिमा परिवार बनाउनुस्, बालबच्चा बनाउनुस् । विशेष गरी राजनीतिमा लागेकाले त विवाह गर्नु नै पर्छ, नत्र धेरै अप्ठयारा आउन सक्छन् । विवाह नगर्ने भन्दा विवाह गर्ने व्यक्तिमा धेरै कुरामा परिपक्वता हुन्छ । नेताको काम भनेकै अरुको माग पूरा गराउने हो । अनि घरमा आफ्ना छोराछोरीको माग पूरा भए मात्रै जनताको माग पूरा हुने हो । विवाह र परिवारलाई संख्याको रुपमा नलिई संस्कारको रुपमा लिनुपर्छ ।
एउटा मात्रै बच्चा हुँदा पुलपुलिएको हुन्छ, बाँडेर नै खान जान्दैन । धेरै बच्चाको घरमा बाँडेर खाने संस्कार बसेको हुन्छ । त्यसैले धेरै सन्तान जन्माउनुलाई नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन ।
गाह्रो पनि त होला नि धेरै सन्तान हुर्काउँन ?
चुनौतीले नै संघर्ष गर्न सिकाउँछ । तुलनात्मक रुपमा बढी प्रेसर त हुन्छ । म राजनीतिमा छु, श्रीमती घरको काम सँगसँगै व्यवसायमा पनि काम गर्छिन् । जसले गर्दा श्रीमान श्रीमतीलाई नै काम गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । व्यस्तताको वावजुद पनि घर परिवारलाई समय मिलाउनु पर्ने हुन्छ । बच्चा जन्मिंदै जाँदा ठूलाले सानालाई हेर्ने गर्दै जाँदा अप्ठ्यारो कम पनि हुन्छ । त्यही हो धेरै सन्तान हुँदा सबैलाई बढि नै प्रेसर हुन्छ । मेरी ठूली छोरी १० कक्षममा पढछिन् र सानी नर्सरीमा छन् । मेरा छोरीहरु तुलनात्मक रुपमा प्रतिस्पर्धी पनि छन् । स्कूलमा पनि प्रतिस्पर्धी छन् घरमा पनि । एउटा मात्रै बच्चा हुनु र धेरै हुनुमा धेरै फरक हुने रहेछ । एउटा बच्चा पुलपुलिएको हुन्छ, बाँडेर नै खान जान्दैन । तर धेरै बच्चाको घरमा सानो कुरा पनि बाँडेर खानुपर्छ । बाबु आमाको नजिक हुन पनि असल हुनु पर्यो भन्ने संस्कारको विकास भएको हुन्छ । त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनु हँुदैन । देशको जनसंख्यालाई मैले ६ जना योगदान गरेँ विश्वको जनसंख्यामा ६ जनाको योगदान दिएँ त्यसैमा म खुसी छु । अव कति बच्चा जन्माउने योजना छ त ?
शेरबहादुर, प्रचण्ड र सीके राउत एउटै शक्तिकेन्द्रबाट चलेका छन् पशुपति शमशेर अब बूढो हुनुभयो, पार्टी हाँक्न कमल थापा नै चाहिन्छ कमलमणिको अन्तरवार्ताः रानी जगदम्बाकै कृपाले ‘दालभात र डुकु’को चिन्ता गर्नु परेन